🥇 Akaụntụ na Dentistry
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 127
Vidiyo nke ịkwụ ụgwọ na ezé ezé
Denye usoro ndekọ ego na ezé ezé
Lọ ahụike eze na-ewu ewu mgbe niile. Ọ bụrụ na mbụ ọrụ nke ndị dọkịta ezé nọ na polyclinics, ugbu a enwere mmetụta maka ntoputa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụike dị warara, gụnyere eze. Ọ na-enye a dịgasị iche iche nke ọrụ site na-achọpụta ọrịa ka prosthetics. Accounting na dentistry nwere ọdịiche dị iche, dị ka ụdị ọrụ nke ịgwọ ndị mmadụ n'onwe ya. N'ebe a, ọrụ dị mkpa na-arụ site na nyocha ụlọ nkwakọba ihe, nyocha ọgwụ, ndị ọrụ na-aza ajụjụ, ịgbakọ ụgwọ ọrụ, ụgwọ ndị ọrụ, na-ewepụta ụdị akụkọ dị iche iche na usoro ndị ọzọ. Ọtụtụ eze na òtù dị iche iche na-eche mkpa iji na-ewebata akpaaka na ajụjụ usoro. Ọtụtụ mgbe, ọrụ nke onye na-edekọ ego gụnyere itinye nlezianya nke ọnọdụ ahụ, ikike ijikwa oge ọ bụghị naanị ọrụ ha, kamakwa ndị ọrụ ndị ọzọ. Ka onye na-akwụ ụgwọ ego iji rụọ ọrụ ya nke ọma dịka o kwere mee, akpaaka nke usoro nyocha ga-adị mkpa. Taa, ahịa teknụzụ ozi na-enye ọtụtụ sọftụwia dị iche iche nke nyocha ezé nke na-eme ka ọrụ nke onye na-eme ka eze mara ahụ. Usoro mmemme kacha mma nke dentistry nwere ike ịtụle n'ụzọ ziri ezi na ngwa USU-Soft. Ọ nwere ọtụtụ uru nke nyeere anyị aka merie asọmpi n'ahịa dị n'ọtụtụ mba. Ihe omume nke eze na-ahụ maka ezé site na ịdị mfe nke iji ya, ntụkwasị obi ya na ngosipụta ihe ngosi nke ozi. Na mgbakwunye, nkwado teknụzụ nke ngwa USU-Soft na-arụ na ọkwa ọkachamara dị elu. Ndị na-eri nke dentistry aza ajụjụ software ga-atọ gị ụtọ. Ka anyị lelee ụfọdụ atụmatụ nke USU-Soft nke a na-eji dịka usoro mmemme na dentistry.
Gbalịa sọftụwia ọhụrụ anyị. Ọ bụ otu n'ime ngwa ahịa kachasị mma na teknụzụ na ahịa. Chekwaa oge ma bulie azụmaahịa gị n’iji iji arụ ọrụ, sọftụwia zuru ezu nke dentistry. Chọpụta atụmatụ ndị dị ike jikọtara na arụmọrụ na arụmọrụ dị mfe. Mee ihe ole na ole na pịa na obere ego. Ngwa USU-Soft dị mma maka ndị dọkịta, ebe ha na-echekwa ihe ruru 70% nke oge ha site na dejupụta akwụkwọ ndekọ ahụ ike, akwụkwọ edetu na ụgwọ na naanị nkeji ole na ole na ngwanrọ nke njikwa ezé. Oge nhazi oge ọ bụla dị n'aka, ihe ncheta na-ekwe ka dọkịta na ndị ọrịa chefuo oge a kara aka. Ngụkọta akpaaka nke usoro ọgwụgwọ na-ebelata oge nhọpụta ndị ọrịa. A na-ejikwa usoro nlekọta ezé na-eme ka ọ bụrụ na ị gụchara akwụkwọ ọrụ zuru ezu, yana usoro ngụkọta nke ego ndị metụtara ọrụ nke ndị ọrụ. Integration na a dịgasị iche iche nke akụrụngwa na-enye gị ọbụna ihe ngwaọrụ-eme ka gị dentistry ọbụna karị irè. Ihe omume nke dentistry aza ajụjụ na-akwado online ego registers na x-ray usoro.
A na-eme ngwa ọrụ na omume oge niile site na ngwa ahụ. Gụọ oge ole ndị dọkịta na ndị na-anabata oriri na-emefu iji dejupụta ihe ndekọ ọrịa, ụgwọ, akụkọ, nkwekọrịta, onyinye azụmahịa, na akwụkwọ ndị ọzọ? Ogologo oge ole ka ejiri nọrọ na-akụziri onye ọhụụ ọhụụ amamihe a. Akpaaka nke usoro na usoro ihe omume na-enye ndị ọrụ oge bara uru maka ọrụ bụ isi. A na-eme usoro mgbagwoju anya na sekọnd. Njehie nke otu onye ọrụ na ngụkọta dị mgbagwoju anya ma ọ bụ mejupụta akụkọ na-abụghị nke ọkọlọtọ nwere ike ịnapụ otu ụlọ ọrụ akụkụ buru ibu nke ego ya. Onye nchịkwa adịghị emehie ihe n'obi; ọ bụ njehie ụmụ mmadụ nkịtị. Sọftụwia ahụ abụghị mmadụ, ọ naghị emehie ihe. Ya mere, jiri ohere a ma kpochapụ mmejọ ruo mgbe ebighị ebi. Hazi usoro ihe ndị ọrụ oge bụkwa ihe bara ezigbo uru nke mmemme mmemme ezé. Ọ dị mkpa ịhazi oge onye ọrụ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, wulite ụdị ndokwa nke onye ọrịa ka dọkịta wee rụọ ọrụ na-adịghị agba ọsọ ọ bụla. N'ime ime nke a, agbụ ahụ agaghị enwe oghere na nhazi oge ahụ ma gharakwa igbu oge ọrụ.
Kedu usoro nlekota oru ọgwụ na ọgwụ? Ezubere usoro imekọ ihe ọnụ iji chedo ndị na-azụ ahịa site na ọgwụ megidere iwu ma nye ụmụ amaala na ụlọ ọrụ ọrụ iji chọpụta ngwa ngwa iwu nke ọgwụ. Tụkwasị na nke ahụ, iwebata usoro nke ezé ezé na-enye nkọwa zuru ezu banyere mmegharị nke ngwugwu ahụ, yana ozi nke na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịgafe ọzọ (dịka ọmụmaatụ, ozi na erere ngwugwu ahụ ma ọ bụ wepụrụ site na mgbasa maka ndị ọzọ ihe kpatara ya).
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghara ịdabere na mmemme nke ezé eze ezé na-enye na freentanetị n'efu. Onye njikwa ihe amamihe ghọtara na ezigbo azụmaahịa chọrọ ngwa dị mma. Otú ọ dị, ọ dịghị ọbụna ngosipụta nke ịdị mma na ngwa nke bụ n'efu. Anyị na-enye gị ihe pụrụ iche ma baa uru na ọrụ nke eze gị. Anyị enwetawo ahụmahụ ma nwee ike ijide gị nke kachasị mma nke mmemme nke dentistry na-arụ ọrụ, yana nke ndị ọrụ nkwado ọrụ. Ndị ọkachamara anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile inyere gị aka na nsogbu gị, yana ị na-enye ụfọdụ ọrụ ọhụụ dị elu na ngwugwu enwetarala nke ọrụ nke ngwa USU-Soft. Nanị ihe na-ekewapụta ụlọ ọgwụ gị yana mmemme a bụ mkpebi nke ịkwesịrị ịme onwe gị. Anyị egosila gị ihe ị ga - enweta na sistemụ ahụ, ndị ọzọ dabere na gị!